Cognos Kuongorora Blog - Matipi uye Matipi eNzvimbo Huru & Yakakwira Vhoriyamu - Motio
Soterre Yekuronga Ongororo
Kune IBM Kuronga Ongororo
Cognos Kuongorora Blog - Matipi uye Matipi eNzvimbo Huru & Yakakwira Vhoriyamu
by John BoyerDai 17, 2021Blog, Cognos Analytics, Cognos Performance, Cognos Troubleshooting, ReportCard0 mashoko
A blog naJohn Boyer naMike Norris.
Izvo zvakakosha kuti uve neCognos Auditing kugona kushanda kuti uzive uye unzwisise mashandisirwo eCognos nharaunda yako yemushandisi uye kubatsira kupindura mibvunzo yakaita seiyi:
Ndiani ari kushandisa system?
Ndeapi marekisheni avari kumhanya?
Ndeipi nguva yekumhanya nguva?
Nerubatsiro rwezvimwe zvishandiso, senge MotioCI, ndezvipi zvirimo zvisina kushandiswa?
Tichifunga nezvekukosha kwazvinoita kuchengetedza hutano hweCognos Analytics nharaunda, zvinoshamisa kuti zvishoma zvakanyorwa nezve dhatabhesi yaro yekuongorora kupfuura zvakajairika zvigadzirwa zvinyorwa. Pamwe, zvinotorwa sezvisina basa, asi masangano anoshandisa iwo anoziva kuti nekufamba kwenguva kubvunza ma Audit Database tafura ichatanga kunonoka - kunyanya kana sangano rako riine vashandisi vakawanda vachimhanyisa marevhoti uye riine yakawanda nhoroondo. Zvakare ndezvekuti chiitiko chekuongorora kuzvitema pachacho chinogona kunonoka nekuti chiri kumiswa mumutsetse kana chisingakwanise kuwedzerwa kudhatabhesi nekukasira, semuenzaniso. Ndipo paunotanga kufunga nezve dhatabhesi kuita sezvaungaita nechero dhatabhesi rekushanda rine zvido zvekuzivisa.
Matafura mahombe anononoka kuita mhinduro. Iyo yakakura tafura, inoreba kutora uye kubvunza. Rangarira kuti matafura aya uye iyo Dhatabhesi Dhatabhesi ndeyechokwadi dhatabhesi inoshanda. Writs zviri kuitika kazhinji uye zvinoshanda zvichipesana nesu sezvo isu tisingakwanise kuzvitarisa kune kungoverengwa mashandiro sezvaungaita ne data mart.
Zvakawanda senge chitoro chemukati, hutano hwenzvimbo yeCognos inofanirwa zvakare kufunga nezve hutano hweAudit Database. Kukura kusingaverengeki kweDhisheni Dhatabhesi kunogona kuita nharo nekufamba kwenguva uye kunogona kupedzisira kwaita kukanganisa kwese kuita kweCognos nharaunda. Mumasangano mazhinji ane mirawu yekunze inoiswa pavari, kusava nerevhitokodhi yakazara kunogona kuvapinza mune isingateedzere mamiriro pamwe nezvinorema. Saka tinoita sei nekuchengetedza dhata yakawanda kwazvo yezvinangwa zvekuongorora nhoroondo - mune dzimwe nguva kusvika pamakore gumi - asi tichiri kuwana chirevo chatinoda kuchengetedza nharaunda uye kuchengetedza vashandisi kufara nekuita?
Kukura kusingagumi kweAudit Database kuri kukanganisa hutano hweiyo nzvimbo yeCognos
Kumhan'arira kubva kuDhisheni Dhatabhesi kwave kunonoka kana kushomeka
Cognos zviitiko zvinononoka mumarekodhi ari kunyorerwa kuDhisheni Dhatabhesi
Iyo Dhatabhesi Dhatabhesi iri kupererwa nediski nzvimbo
Zvese izvi zvinoreva kuti haizi chete marepoti anovimba neAudit Database ayo anotambura, asi kazhinji hurongwa hwese. Kana iyo Audit Dhatabhesi iri pane imwechete server seyeCognos yemukati chitoro, mashandiro ezvinhu zvese Cognos anozokanganiswa munzvimbo iyoyo.
Cognos Analytics yakaiswa uye inomhanya
Cognos yakagadzirirwa kuti ipinde muAudit Database
Iva ne Audit Database munzvimbo
Gadza akakodzera Audit kutema matanho mumatunhu eCognos manejimendi
Rekodhi iri kunyorwa kune dhatabhesi neCognos
Iyo Audit Database yave ichishandiswa kweanopfuura gore
Iyo nharaunda inoshanda zvakanyanya nevashandisi uye kuuraya
Iyo Audit package iri kushandiswa kuburitsa data yeCognos yekushandisa
Tiri kutsvaga kuvandudza Audit Databhesi yekuzivisa mashandiro
Kutanga pamusoro kana kudzima zvinyorwa zvekare hazviwanzo sarudzo
Kana usinga, zvakadaro, une Cognos Audit yakaiswa uye yakagadzirirwa, Lodestar Solutions, a Motio shamwari, ine yakanakisa pambiru pakubvumira Kuongorora muCognos BI / CA.
Kune dzimwe mhinduro dzinogoneka dzinokurumidza kuzviratidza.
Deredza huwandu hwe data ne:
Kufambisa imwe yekare data kune imwe dhatabhesi
Kufambisa imwe yekare data kune imwe tafura mune imwecheteyo dhatabhesi
Ingo bvisa kana archive mamwe e data uye usazvidya moyo nezvazvo
Rarama nazvo. Kick iyo inogona pasi iyo road uye Pusha iyo Dhatabhesi Administrator yekuita
kuvandudza uchivasungisa nekusabvumidza shanduko yeiyo schema kana
Hatisi kuzobata nesarudzo 3. Sarudzo 2, kudzima iyo data, haisi sarudzo yakanaka uye ndingakurudzira kuchengetedza inokwana mwedzi gumi neshanu 'kukosha. Asi, kana iwe uchida kudaro, IBM inopa chishandiso, AuditDBCleanup (Cognos BI) kana a chinyorwa (Cognos Analytics) iyo ichaita chaizvo izvo. Chishandiso cheCognos BI chinobvisa zvinyorwa zvichibva patestampamp apo zvinyorwa zveCognos Analytics zvinongodzima ma indexes uye matafura.
Kurudziro yatakaita kuvatengi kare pane izvi yaifanira kupatsanuka kuita maviri dhatabhesi:
Audit - Rarama: ine yakanyanya kukosha svondo rapfuura data
Audit - Nhoroondo: ine nhoroondo yezvakaitika (kusvika pamakore N)
Muchidimbu, maitiro acho anomhanya vhiki nevhiki kufambisa marekodhi akawandisa kubva ku Audit Live kuenda ku Audit Historical. Audit Live inotanga pamusoro sepasipo isina chinhu mushure mekunge maitiro aya amhanya.
Iyo Live DB inokurumidza uye yakasimba, ichibvumira kuisa mukati kuti zviitike nekukurumidza sezvinobvira
Mibvunzo yekuongorora inongotungamirwa kune iyo Nhoroondo DB
Uchishandisa nzira iyi, hapana chakajeka "kusona pamwe" kweiyo Live data uye iyo Nhoroondo dhata. Ini ndaizopokana kuti pamwe iwe unoda kuzvichengeta zvakadaro.
MuCognos Administration, iwe unogona kuwedzera maviri akasiyana kubatana kweAudit Dhata Sosi. Kana mushandisi akamhanyisa mushumo achipesana neAudit package, vanokurudzirwa kubatana kwavanoda kushandisa:
Pane mukana uri kure waunoda kutarisa dhijitari yekuongorora pane data rezvakaitika kare, unongotora chinongedzo che "Audit - Live" paunokurudzirwa (chinofanira kunge chiri icho chisiri icho, kwete chinowanzoitika.)
Kana iwe UCHIDA zvakare uchida kupa yakasimbiswa maonero eese Kurarama uye Nhoroondo, iwe unogona kuzviita, asi zvinokanganisa mashandiro.
Semuenzaniso, unogona kugadzira Dhatabhesi yechitatu inonzi "Audit - Consolidated View" uyezve, yetafura yega yega mu Audit schema: gadzira iyo yakafanana zita rinotaridzika iyo mubatanidzwa weSQL pakati petafura muRarama DB uye tafura iri nhoroondo DB. Saizvozvo, izvi zvinogona zvakare kuwanikwa mune iyo Sisitimu yeManeja modhi, asi, zvakare, kuita kungave kwakakosha kutariswa.
Vamwe vedu vatengi vakagadzira yakasimbiswa maonero. Iko kufunga kwedu kuti izvi zvinogona kunge zvinokunda. Kuita kwaizogara kuchikura mune ino yakasimbiswa maonero uye isu hatina kusangana nezviitiko zvakawanda zvekushandisa izvo zvinoshandisa ese eLive data maseti uye Nhoroondo. Iyo Live irikushandisirwa kugadzirisa matambudziko uye iyo Nhoroondo yeiyo mamiriro ekuzivisa.
Sezvo yeCognos Analytics 11.1.7, iyo Dhatabhesi Dhatabhesi yakura kusvika pamatafura makumi maviri nerimwe. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo kumwe kunhu pane iyo Audit Dhatabhesi, sampuro yekuongorora marekodhi uye iyo Sisitimu Yemaneja modhi. Iyo yekumira yekutema matanda ndeyeMidiki, asi iwe ungangoda kushandisa inotevera nhanho, Chekutanga, kutora zvikumbiro zvekushandisa, mushandisi account account uye yekumhanyisa nguva yekushandisa. Imwe nzira yaunogona kuchengetedza mashandiro ehurongwa ndeyekuchengeta danho rekutema kusvika padanho repasi rinodiwa. Zviripachena, iko kutema matanda kunoitwa neseva, iko kwese server kuita kunogona kukanganiswa.
Iwo matafura akakosha mazhinji evatariri achafarira mune iwo matafura matanhatu ayo anonyora mushandisi chiitiko uye chiitiko chekuzivisa muchirongwa.
COGIPF_USERLOGON: Zvitoro mushandisi logon (kusanganisira log off) ruzivo
COGIPF_RUNREPORT: Inochengetedza ruzivo nezve kuurayiwa kwemushumo
COGIPF_VIEWREPORT: Inochengetedza ruzivo nezve chirevo chekuona zvikumbiro
COGIPF_EDITQUERY: Inochengetera ruzivo nezve query inomhanya
COGIPF_RUNJOB: Inochengetedza ruzivo nezve zvikumbiro zvebasa
COGIPF_ACTION: Rekodhi zviito zvevashandisi muCognos (tafura iyi inogona kukura nekukurumidza zvakanyanya kupfuura mamwe acho)
Iyo yekunze-kwe-iyo-bhokisi kurongedzwa inotaridzika seiyi:
Iyo Cognos Audit Dhatabhesi - Rarama ine 1 vhiki rezvinyorwa zvekuongorora. Dhata rakakura kupfuura 1 vhiki inoendeswa kuCognos Audit Database - Historical.
Mutsetse unobva kuCognos Audit Dhatabhesi - Rarama kuCognos Audit Dhatabhesi - Nhoroondo mune dhayagiramu inoitirwa:
Kuteedzera data kubva kuLive Audit kuenda kuNhoroondo Yekuongorora
Bvisa mitsara yose muRarama Audit iyo yakura kupfuura vhiki rimwe chete
Bvisa mitsara yese muHistorical Audit ayo akura kupfuura x makore
Bvisa mitsara yose muCOGIPF_ACTION iyo yakura kupfuura mwedzi mitanhatu
Mhando dzakasiyana dze database dzine dzakasiyana indexing mhando. Iyo dhatabhesi indekisi dhizaini dhizaini, inosanganisirwa neTafura (kana Tarisa), inoshandiswa kugadzirisa mibvunzo nguva yekuuraya kana uchidzosera data kubva patafura (kana Tarisa). Shanda neDBA yako kuti ugadzire rakanakisa zano. Vachada kuziva mhinduro dzemibvunzo yakadai kuti vaite sarudzo dzakanakisa pane ayo makoramu kunongedzera. Zviripachena, iyo database maneja anogona kutsvaga mhinduro kune mimwe kana yese iyi mibvunzo pasina rubatsiro rwako, asi zvinotora imwe ongororo uye imwe nguva:
Iwo mangani marekodhi ane matafura uye kune saizii yaunotarisira kuti iwo akure? (Kunongedza tafura hakuzobatsire kunze kwekunge tafura iine nhamba huru yezvinyorwa.)
Unoziva here kuti ndeapi makolamu akasarudzika? Vanotendera NULL kukosha? Ndeapi makoramu ane dhata mhando yehuwandu kana hombe manhamba? (Iwo makoramu ane nhamba dzemhando dzedata uye ayo ari UNIQUE uye ASI NULL ndivo vakwikwidza vakasimba kutora chikamu mukiyi yekiyi.)
Aripi ako makuru ekuita matambudziko nhasi? Ivo vari mukutora iyo data? Iko kune chaiko mibvunzo kana mishumo iri iro rakawanda dambudziko? (Izvi zvinogona kutungamira manejimendi wedhatabhesi kune mamwe makoramu anogona kukwidziridzwa.)
Ndeapi masimi anoshandiswa mukujoinisa matafura ekuzivisa?
Ndeapi masimi anoshandiswa kusefa, kurongedza, kuunganidza uye kuunganidza?
Hazvishamisi kuti iyi mibvunzo yakafanana iyo ingazoda kupindurwa yekuvandudza mashandiro ematafura e database.
IBM Tsigiro inokurudzira kugadzira index pamakoramu "COGIPF_REQUESTID", "COGIPF_SUBREQUESTID", uye "COGIPF_STEPID" yematafura anotevera ekuvandudza mashandiro:
Uyezve pane mamwe matafura asinganyanyo shandiswa:
Unogona kushandisa izvi senzvimbo yekutangira, asi ini ndaizoenda kuburikidza neiko chiitiko chekupindura mibvunzo iri pamusoro kuti usvike pamhinduro yepamusoro yesangano rako.
Kuongorora FM Model. Rangarira kuti iyo Framework Manager modhi iyo IBM inopa inoenzanisirwa pamatafura emhando neminda. Chero shanduko dzaunoita kumatafura ekuzivisa dzinenge dzichida kuratidzwa mune modhi. Iko kureruka kana kuomarara kweshanduko idzi - kana kugona kwako kwesangano kuita shanduko idzi - zvinogona kukanganisa mhinduro yaunosarudza.
Kuwedzera minda. Kana iwe uchizozviita, ino ndiyo nguva yekuwedzera mimwe minda yemaonero kana dhata rekunongedzera kuvandudza kubvunzurudza kwekuongorora.
Pfupiso matafura. Panzvimbo pekungoteedzera iyo data kutafura yako yezvakaitika kare, tsimbirira. Unogona kusanganisa iyo data kusvika padanho rezuva kuti iite kuti inyatsoita basa rekuburitsa.
Maonero panzvimbo pematafura. Vamwewo vanoti, "Saka, pachinzvimbo chekuva ne 'razvino' dhatabhesi uye 'nhoroondo' dhatabhesi, iwe unofanirwa kungova nedhatabhesi imwe chete, uye matafura ese arimo anofanira kuiswa pamberi ne 'nhoroondo'. Ipapo, unofanirwa kugadzira seti yemafungidziro, imwe yetafura imwe neimwe yaunoda kuona se'yazvino ', uye wonoona yega yega sefa kunze kwemitsara yenhoroondo yausingade kuona uye rega izvozvi zvipfuure chete. "
Chinokosha ndechekuti neruzivo rwunopihwa pano iwe unofanirwa kunge wakagadzirira kuti uve nehurukuro inobudirira neDBA yako. Mikana yakanaka kuti akagadzirisa matambudziko akafanana kare.
Shanduko dzakarongedzerwa muCognos Audit Database dhizaini ichavandudza mashandiro mukutaurisa kwakananga pamwe nekunyorera kwechitatu-bato rinovimba naro, senge Motio's ReportCard uye Inventory.
Nenzira, kana iwe wakamboita hurukuro iyoyo neDBA yako, tinoda kunzwa nezvazvo. Tinodawo kuda kunzwa kana iwe wakagadzirisa nyaya yekusaita zvakanaka Audit Database uye kuti wakazviita sei.
Inoenderana neBlog Zvinyorwa
BlogCognos AnalyticsCognos PerformanceNdiwedzere Factory
Saka Wasarudza Kuvandudza Cognos… Zvino Chii?
Kana uri nguva refu Motio muteveri, iwe unozoziva kuti isu hatisi vaeni kuCognos kukwidziridzwa. (Kana iwe uri mutsva ku Motio, Mauya! Tiri kufara kuva newe) Isu takadaidzwa kunzi "Chip & Joanna Gains" yeCognos Upgrades. Zvakanaka mutongo wekupedzisira kuwedzeredza, ...
Case StudiesFinancial ServicesMotioCINdiwedzere Factory
Usave Nekutya, Iyo Nyore Cognos Kusimudzira Iri Pano
Chikwata cheCoBank chinovimba neCognos yehurongwa hwekushanda kwayo uye nehurongwa hukuru hwekuzivisa zvemari. Kuchengeta Cognos kukwidziridzwa kunovatendera ivo kuti vachengetedze kusangana pamwe nemamwe maBI maturusi uye masisitimu. Chikwata ichi chine vashandisi vebhizimusi mazana matanhatu vane vashoma vanogadzira yavo pachavo mashumo mu "Zvangu Zvemukati" nzvimbo.
Virtual Cognos Mushandisi Boka - North Texas
Paunonzwa izwi, "Texas" chii chinouya mupfungwa? Pamwe ndidzo gumi-marita ngowani, cowboy bhutsu, barbeque, Cognos performance optimization! Zvakanaka, pamwe chako chaunofarira BI chishandiso hachisi pamusoro pendangariro, asi chinofanirwa kuve! Kwenguva yekutanga nguva dzose, Motio iri kubata iri kumusoro kweNorth ...
Ngatitemei kumhanya. Cognos performance ndechimwe chinhu chausingafunge nezvacho kusvikira zvanyanyisa. Isu takaongorora vashandisi veBM Cognos Analytics nezve maitiro avo ekuita uye tikanyora zvakawanikwa mune infographic. Izvi ndizvo zvatakawana: Iwe hau ...
Ongororo muRetail: Iyo Iyo Dhata Yakarurama?
Retail ndeimwe yemabhizimusi epamusoro ari kushandurwa neAI uye Tekinoroji tekinoroji. Vatengesi vevatengesi vanofanirwa kusanganisira kupatsanura, kupatsanura, uye kufananidzwa kwemapoka akasiyana evatengi uku vachichengeta mafambiro ari kuramba achiitika mufashoni. Chikamu ...
arun | Jan 19, 2021 | 0
MotioCI 3.2.8 - Kuburitswa Kwazvino
MotioCI 3.2.8 inorarama, uye isu tichave tichikupa iwe kumhanya pasi yezvakanakisa mabhenefiti kwauri- wekupedzisira mushandisi! Yakawanda-peji HTML yakawedzerwa seye inoburitsa mhando yekuyedzwa. Nezvo, MotioCI inogona nani kufungidzira mashandisiro anoita vashandisi mishumo - peji rimwe chete panguva. Mishumo ...
arun | Dec 23, 2020 | 0
Bhalisa kuNhau Yedu